Inkinga yokulahleka kwe-Coaxial - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Izintambo ze-Coaxial zisetshenziswa kakhulu embonini, futhi ukulahleka kwazo bekuhlala kukhathaza.Imvamisa ephezulu kakhulu i-ulayini we-coaxial usetshenzisiwe, kukhulu ukulahleka.Izizathu ezithile zimi kanje.
Okokuqala, ukuphakama kwesiginali kuyanda, umphumela wesikhumba uyaqina.Lapho kugxila kakhulu ukudluliswa ebusweni bensimbi, kuncane indawo yokudlulisa enqamula esigabeni. Ngakho-ke, lapho kukhula khona impedance, kukhulu ukulahleka. Ukuze unciphise ukulahleka, ulayini we-RF usebenzisa izinsimbi eziyigugu (ukuqhuba okuphezulu, inqubo eqondile yokukhiqiza, njll.).
Okwesibili, ukulahleka komugqa we-coaxial kuhlukaniswe nokulahleka kwe-dielectric nokulahleka komqhubi wensimbi.Okuyinhloko ukulahleka kwe-dielectric. Ngokuvamile, i-dielectric engaguquki ehlala njalo iphansi futhi i-dielectric loss angle factor incane, ukuze ukuncipha kuncane. Okuphakathi kudinga ukwakheka okungaguquguquki ukuqinisekisa impedance efanayo. Ukuphakama kwemvamisa, kuba nzima kakhulu ukugcina i-impedance engaguquguquki neqhubekayo, futhi ukulahleka kokukhombisa kuzoba kukhulu.
1. Ukulahleka kwe-dielectric: Lapho imvamisa iphakeme, i-dielectric eqhubekayo ingumsebenzi wemvamisa ngenxa yokuhlakazeka kwento. Isizathu esiyisisekelo ukuthi izinhlayiya ezikhokhisiwe zishintsha ngokuhlukile ngenkambu kagesi eshintshanayo. Izinguquko ze-coefficient ye-dielectric nge-frequency kufanele ibe nenani eliphakeme, kepha ngenxa yokuthi i-coaxial line insulation iyinto engeyona eye-polar, ukusabalalisa kwe-coefficient ye-dielectric kusuka kumvamisa ophansi kuya kumvamisa ephezulu kubuthakathaka kakhulu.
2.Ukulahleka kwe-conductor: Uma kukhulunywa, ukulahleka komqhubi kungahlukaniswa kabili: ukulahleka kokushisa nokuvuza kwe-electromagnetic okubangelwe ukuvikelwa okungaphelele. Izinga elifanayo lokuvikela linemiphumela ehlukene yokuvikela kumagagasi kagesi wamafrikhwensi ahlukene, nemiphumela yokuvikela kumaza aphezulu. Hhayi imvamisa ephansi (kunjalo, lokhu akuyona ingxenye eyinhloko yokulahleka).
Okwesithathu. Ukujula kwesikhumba Î´ = 1 / Ï € fuÏƒ; indawo enqamulelayo yamanje yokudlulisa s = Ï € [(r + Î´) ²-r²]; ukumelana nokudluliswa R = 1 / Ïƒs;
Ekugcineni. Ikhebula le-coaxial lincane futhi lide, ukulahleka kukhulu, futhi ukuphakama kwemvamisa yesiginali, ukulahleka kukhulu.
Lokhu okungenhla ukulahleka kwekhebula le-coaxial.Ikhebula le-Coaxialingumkhiqizo oyinhloko wenkampani yethu. Uma unemibuzo mayelana nekhebula le-coaxial, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Okulandelayo, ngizokwabelana nawe ngezindlela ezithile zokunquma ikhwalithi yomugqa we-coaxial:
1. Qaphela ukuzungeza kwento evikela.
2. Thola ukungaguquguquki kwendlela yokuhlukanisa ikhebula le-coaxial.
3. Thola inetha eliboshwe lekhebula le-coaxial.
4. Hlola ikhwalithi ye-aluminium foil.
5. Hlola ukuqina komgodla wangaphandle.
6. Bheka ukuma komugqa we-coaxial ku-loop.